Diseembar | 2009 | WEEJIDOW
Archive for Diseembar, 2009
War Deg Deg ah: Ahlu Sunna iyo Xisbul Islaam oo isku fara saaray Hiiraan.
Diseembar 27, 2009
BELEDWEYNE:-Dagaal ayaa dib uga soo cusboonaaday gobolka Hiiraan kaasoo u dhaxeeya Xisbul Islaam iyo Ahlu Sunna oo ka mid ah kooxaha Islaamiyiinta Soomaaliya.
Dagaalki maanta ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Waadiga Xujuub oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan.
Dagaalki maanta ayaa la sheegay in ay ku dhinteen laa iyo lix ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan,walow aanan la hubin tiro rasmi ah oo la xaqiijiyey ilaa iyo iminka.
Culumaa’udiinka Ahlusuna ayaa guulo ballaaran ka sheegtay dagaal maanta ka dhacay duleedka Magaalada Beldweyn, kaasoo ay ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen Ciidamada Xisbul Islaam ee gacanta ku haya.
Afhayeen u hadlay Ahlusuna oo ku sugan Gobolka Hiiraan oo lagu magacaabo Aadan Cabdule Cawaale ayaa sheegay in dagaalkaas ay ka dambeeyeen Ahlusuna, isla markaana ay guulo ka gaareen.
Aadan Cabdulle Cawaale oo ahaa Gudoomiyihii hore degmada Maxaas ayaa intaa ku daray in gaari dagaal iyo qoryo gacmeedyo ay ka qabsadeen Xisbul Islaam, waxaana uu sidoo kale sheegay in ay ka gubeen gaari dagaal.
Waxaa uu sheegay in ay haatan ku wajahan yihiin magaalada Beledweyn si ay halkaas ula wareegaan, isagoo xusay in Ciidamadooda ku sugan yihiin hareeraha Beledweyn.
Mas’uul u hadlay Xisbul Islaam oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Beledweyn ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin guulaha ay sheegayaan, waxaa uu cadeeyay in afar ruux laga dhaawacay, halkii lagu soo weeraray ay wali ku sugan yihiin.
Aada C/dulle Cawaalle oo ahaa Guddoomiyaha Degmada Maxaas ayaa isaga oo jooga degmada Caabud-waaq u sheegay warbaahinta in dagaalkiisa ahaa mid qorsheysan islamarkaana Ciidamada Xisbul Islaam lagu gaarsiiyay khasaare sida uu hadalka u dhigay culus.
Aadan C/dulle waxaa uu intaa raaciyay in weerarkaasi lagu gubay gadiid kuwa dagaalka ah kuwo kalana lagu kaxeystay, waxaana uu intaa ku daray in ay jiraan rag ay ka dileen Ciidamada Ururka Xisbul Islaam.
Culumaa’udiinka Ahlusuna oo haatan gacanta ku haya Gobolka G/gaduud ayaa quudareynaya in ay la wareegaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan Gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe, iyadoo weerarka ay ku qaadeen duleedka B/weyn uu yahay kii u horeeyay oo ay soo qaadaan.
Xarakada Shabaab oo kaga digey shacabka reer Muqdisho dhegeysiga Raadiyo Muqdisho.
Shabaab ayaa caawa waxa uu ka hadalay idacada ku hadashada afka dowlada KMG ee Soomaliya islaamrkaan lagu tilmamay in ay tahay mid buubuunisa figradaha gaalada, iyadoona looga digay shacabka Muqdisho dhageysiga idacada Dowlada.
Afhayeen Xarakada Shabaab Sheekh Cali Dheere ayaa maanta sheegay in dadka dhageeysta idacada ku hadashada Afka dowlada ay la mid yihiin iyaga ee uu kala jeeday dowlada KMG ee ay ku sheegaan in ay Rido tahay.
Afhayeenka ayaa sheegay in Radio Muqdisho uu yahay mid buubuuniya siyaasadaha gaalada islamarkaana ka soo horjeeda diinta islaamka sida uu hadalka u dhigay , isagoona soo daliishaday aayado ka hadlaya arintaasi.
Hadalkaani afhayeenka ayaa waxa uu ka sheegay kulan lagu heshiisiinayey beelaha Abaal iyo Murusade ee horay ugu dagaalamay deegaano ku yaala hareeraha gobolka Banaadir.
Hadalka Shabaab ee ku aadan idacada ku hadashay afka dowlada ayaa ka danbeyey ka dib markii Radio Muqdisho ee ku hadla afka Dowlada KMG uu caqab ku noqday Shabaab iyo xoogag kale ee dowlada ka horjeeda.
Radiyaha Muqdiho ayaa waxa ka shaqeeya wariyayaal caanka ah Magaalada Muqdisho kuwaasi oo si aad ah u qod qodo boogaha Shabaab iyo Xisbul Islaam, sidoo kale waxa jirta idacada ku hadlay afka Shabaab kuwaasi oo gaaleeysiya masuuliinta dowlada hasa yeeshee ku yaala qaar ka mid ah gobolda Shabaab gacanta ay ku hayaan.
Xildhibaanno taageeray shir lagu sameynayo maamul goboleed u gaar ah gobollada Koonfur-galbeed ee Soomaaliya
Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya kana soo jeeda Bay iyo Bakool oo maanta kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa taageeray qorshe lagu dhisayo maamul goboleed u gaar ah Gobollada koonfur-galbeed ee Soomaaliya, kaasoo ay wadaan mas’uuliyiintii horay looga qabsaday Gobolladaas iyo Xildhibaanno dowladda Soomaaliya ka tirsan.
Xildhibaan Max’ed Sheekh Cali oo ka mid ahaa mudanayaashii kulankii maanta ka qaybgalay ayaa saxaafadda uga warramay wixii kasoo baxay kulankooda isagoo sheegay inay taageereen maamulka loo sameynayo 6-da gobol ee koonfurta Soomaaliya ee kala ah Bay, Bakool, Gedo, Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Shabeelaha Hoose.
“Shirka waxaa ka qaybgalay dhammaan xildhibaannada kasoo jeeda Gobollada la sheegay in maamulka Federaalka ah loo samenayo, waxaana taageernay qorshaha, kaasoo noqon doona mid gobolladaas u xaara waddo horumareed” ayuu yiri Xildhibaan Max’ed Sheekh Cali.
Xildhibaanku wuxuu sheegay in 122-mudane oo kasoo jeeda gobolladaas kuna kala sugan dalka iyo dibaddiisa ay taageereen qorshaha, wuxuuna caddeeyay in maamulkaas uu yahay mid waafaqsan nidaamka Federaalka ee ay ku dhisan tahay Dowladda Soomaaliya
Aadan Max’ed Nuur (Saransoor) oo loo doortay afhayeenka kulanka maamulkaas lagu dhisayo, oo la hadlay Laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in qorshahan uu yahay mid aasaas ah, balse ay marka hore gacantooda kusoo celinayaan gobolladan oo ay ka taliyaan kooxaha Dowladda kasoo horjeeda.
Qorshahan ayaa la kulmay mucaaradad kaga timid xubno ka mid ah kuwii horay looga qabsaday gobolladaas kuwaasoo uu ka mid yahay Xasan Macallin Axmed (Biikole) oo ka mid ahaa mas’uuliyiintii Gobolka Bay.
Xasan Biikole ayaa sheegay in marka hore ay tahay in gacanta dowladda lagu soo celiyo degmooyinka iyo gobollada loo sameynayo maamulka, isagoo sheegay in haddii aan taas la sameyn ay maamul u sameynta gobolladaas u muuqato mid la mid ah Shimbirayahow heesa.
Wada Xaajoodkii Gaalkacyo oo Fashilmay iyo Xiisad Colaadeed oo taagan
Diseembar 26, 2009
Warar aan ka helnay Magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in la isku dhaafi waayay wada hadaladii u socday Galmudug iyo Puntland, kadib markii dhinaca Galmudug ay hordhigeen Puntland shuruudo sida la sheegay u cuntami waayay Puntland, waxaana lagu kala tagay wixii aan kala helno ayaan leenahay.
Dhawaan ayay ahayd markii dagaal lagu hoobtay uu dhax maray labada maamul ee dariska ah ee kuwada nool Magaalada Gaalkacyo, waxaana socday tan iyo shalay wada xaajood la rabay in lagu soo afjaro rabshadihii ka dhacay Magaalada.
Dhinaca Galmudug ayaa saddex shuruud soo dhigay madashii shirka kuwaasoo ay gaashanka u daruureen kuwa Maamulka Puntland.
Maamulka Galmudug ayaa dalbaday arimahan kala ah:
1- In Duqa Magaalada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland Xilka laga ceyrsho.
2- In Ciidamada puntland ee ku labisan dharka ciidanka Magaalada laga saaro.
3- in aan loogu iman Suuqa lagu muransanyahay.
Maamulka Puntland ayaa si caro leh u diiday, waxaana lagu kala tagay in magaalada lagu kala baxo waxaana magaalada laga dareemayaa Guluf Colaadeed oo aad u xoogan.
Ilo lagu kalsoonyahayna waxay sheegeen haduusan dagaalka caawo bilaaban in beri bilaaban karo, waxaana ka go’an labada dhinac in ay kala baxaan madaama dagaalada magaalada ka dhamaan weysay dagaal joogta ah.
Labada dhinac ee Magaalada ayaa aad looga qaxayaa waxaana la isu rakibtay Madaafiicda Goobta oo aan horay loo isticmaalin waxaana labada maamul soo kala gaaraya Gurmadyo lixaad leh.
Saas oo ay tahay Masuuliyiinta Galmudug iyo Puntland ayaa dareensan in horumarkoodu ku jiro nabad ay ku wada noolaadaan oo hadii sidatan wax ku socdaan ay dhici karto in qolooyinka islaamiyiinta ka faaideystaan sidaasna gobolku gacanta ugu galo xulufada Al-Qaacida.
Ma muuqato in labada Maamul xabad ku gaari doonaan wax ay wada xaajood ku waayeen, shakina kuma jiro in la heshiin doono marka dad iyo duunyaba halaagsamaan.
6 Gobol oo ku yaal koofurta Soomaaliya ayaa la doonayo in maamul goboleed loo sameeyo
wararka laga helayo Degmada dolow ee gobolka Gedo aya waxaa manta laga soo saarey in la dhisi doono maamul goboleed ay yeeshaan gobolda kooforeed ee Gedo.Bagool, Bay, Shabeelada hoose, Jubbada Dhexe, iyo Jubbada hoose.
Kulanka ayaa waxa qudbadii loogu tala galey in la shaaciyo waxa ka aqriyey Adan Saransoor oo u dhashey Hadamo – Digil & mirifle kana tirsanaa maamulkii Gobolka bay ayaa halkaasi ka shegay in mudadii la soo wadey shirkaan ay manta ku akeyd sii socoshadiisa mudo 3 bilooda laguna dhisey gudi ka kooban ilaa 21 xubnood oo loogu magic darey gudiga wadatashiga biyo qabanqaabada gobolada Maamul goboledka koofureed ee lixdaa wixii hada ka danbeyana ay ayaku heyn doonaan masuuliyad ilaa shirka lagu dhisayo laga qabanayo.
Kulanka ayuu sheegay in ay joogan masuuliyiinta ka kala socota dhamaan Goboladaas ee dowlada iyo waliba Xildhibano ka tirsan ayakuna dowlada sifiicana looga wada tashadey intii uu socdey oo aheyd mudo dheer inla markasna ay dowladu wax ka ogtahey waa sida uu hadlka u dhigaye Aadan Saransoor.
Sidoo kale waxaa uu shegay in aysan jirin cid gacan ka siisiyey mudaas 3-da bilood ah ee howlahooda maamul u sameynta lixda gobol ee koofurta Soomaliya la wadey balse ayaku ay howlahooda wateen shirarkooda ay cadi u socdeen iyo wada tashiyada.
War murtiyeedkaan maanta ay Degmada Doolow ee gobolka Gedo ka soo sarareen saraakishii hore ee dowlada ayaa goboladaan ay doonayaan in ay maamulka u sameeyaan ayaa ku soo aadaya xili dhamaan goboldaan gacanta ku hayaan Xoogaga Shabaabul Mujaahidiin iyo Xisbul Islaam Dhamaan Goboldaan oo labaduba hogaamiyo dad u dhashay Digil & Mirifile. Degmada Doolow ayaan weli Al-shabaab qabsanin oo daris la ah Xadka Ethiopia.
War Deg Deg ah: Qarax qasaaro geystay oo Caawa ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Qarax qasaaro geystay ayaa Caawa waxa uu ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa caawa qarax lagula beegsaday ciidamo katirsan maamulka Somaliland halka loo yaqaano Efta oo katirsan magaalada Laascaanood.
Nabadoon Maxamed C/laahi oo kamid ah Nabadoonada Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa uu Idaacada Waajidpress u sheegay in qaraxa uu ahaa qarax culus islamarkaana lagu weeraray Ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Somaliland oo marayay bartamaha magaalada Laascaanood isagoona tilmaamay in qaraxaasi uu ku dhintay hal askari dad kale oo rayid ahna ay ku dhaawacmeen.
Warar madax banaan oo iyana laga helayo magaalada Laascaanood ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxu uu ahaa qarax bambaano islamarkaana ay ku dhaawacmeen dad rayid ah inkatsoo aan si dhab ah loo ogeyn tirada dadkaasi iyo waliba waxyaabaha rasmiga ah ee ka danbeeya qaraxaasi.
Si kastaba ha’ahaatee ma ahan markii ugu horaysay oo qarax uu ka dhaco gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool inkastoo wali aaney jin wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka maamulka magaaladaasi.
Wafdi uu hoggaaminayo ku-xigeenka ra’iisul wasaaraha prof. Ibbi oo booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Manila ee dalka Philippines
Waxaa magaalada Manila ee dalka Philippines ka degey wafdi rasmi ah oo uu hogaaminayay Ku-Xigeenka Ra’iisul Wasaaraha, ahna Wasiirka Kalluumaysiga iyo Kheyraadka Badda XFKMG ah ee Soomaaliyeed, ayna ku weheliyeen Danjire Maxamuud Colow Barow, Danjiraha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed u fadhiya dalka Indonesia, Admiral Faarax Axmed Cumar (Farax Qare), Taliyaha Ciidanka Badda iyo Ilaalada Xeebaha Soomaaliyeed iyo xubno kale iyagoo martiqaad rasmi ah ka helay Xukuumadda Philippine.
Booqashadan oo ahayd dhameystir wada hadal ay bishii September 2009 ku yeesheen magaalada Tripoli ee dalka Libya Md. Cumar Cabdirashid Cali Sharmarke, Ra’iisul Wasaaraha XFKMG ah ee Soomaaliyeed iyo Madaxweyne Gloria Arroyo, Madaxweynaha dalka Philippines iyo kulan bishii May 2009 dhex maray Wasiirka Kalluumaysiga dalka Philippine iyo Ku-Xigeenka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Prof. Ibbi ka dib markii ay ku wada kulmeen Magaaladda Namada ee dalka Indonisia shirwaynihii arrimaha badda looga hadlaayey, uguna ballameen in ay labada xukuumadood ka wada shaqeeyaan horumarinta xiriirka labada dal. Sidoo kale kulanka labada madax ee ka dhacay Tripoli ayaa lagu qaadaa dhigay arrimo muhiim ah oo ay ugu horreeyeen wax ka qabashada dhibka ka taagan badda Soomaaliyeed iyo sida ay dawladda Philippine gacan uga geysan karto tababarida shaqaalaha dawladda qeybahooda kala gedisan, iyadoo lala kaashanayo hay’ado iyo dawladaha daneeya arrimaha Soomaaliya.
Booqashadan oo ku soo beegantay waqti uu wadanku u diyaargaroobayo doorashooyin madaxtinimo, ayaa haddana waxay dawladda Philippine muujisay sida ay uga maqsuudsan tahay sare u qaadista xiriirka labada dawladood oo haatan u muuqdo mid bog cusub loo furay, maadaama uu wafdigan noqonayo kii ugu horeeyay ee rasmi ah ee booqasho ku yimaada mudo 30 sano ah ka dib. Wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyay, Agaasimaha Guud ee Protocolka Qaranka, Agaasimaha Guud ee Xiriirka Caalamiga ah, Agaasimaha Guud ee Asia iyo Africa ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda Philippine, Danjiraha Dawladda Philippine ee Soomaaliya oo fadhigiisu yahay Kenya, Danjiraha Soomaaliyeed ee Indonesia iyo Agaasimayaal ka kala socday waxyaha Wasaaradda Arrimaha Dibedda, Shaqada iyo Shaqaaleynta, Xafiiska Madaxtooyada iyo Ciidanka Ilaalada Bada Philippine bacdamaa wafdiga uu imaanayey saq dhexe.
21 December 2009, wafdiga wuxuu kulan muhiim ah la qaatay Jeneraalada hogaamiya Ciidanka Ilaalada Xeebaha Philippine ee madaniga ah ee hoos yimaada wasaaradda Badda iyo horumarinta kalluumaysiga, halkaas oo Madaxa iyo Xubnaha wafdiga ay salaan sharaf ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka, maadaama uu ahaa kulanka ugu horeeyo ee ay wafdigu yeesheen imaatinkoda ka dib. Salaantaas ka dib, ayaa wafdiga wuxuu la qaatay hogaanka Ilaalada Xeebaha Philippine kulan aad u muhiim ah oo lagu gorfeeyay qaabka ay wada shaqeyn xoogan u yeelan lahaayeen labada ciidan iyo sida ay ugu gudbin karaan Soomaaliya khibrada ay u leeyihiin ka hortaga dhibaatooyinka xeebaha ka dhaca, iyadoo ciidanka xeebaha Philippine dhowaan la siiyay manadate cusub oo ay qeyb uga noqonayaan badbaadada shacabka marka ay dhacdo daadad iyo fatahaad ku habsada magaalooyinka qaar. Hogaanka ciidanka ayaa soo dhoweeyay qeyb ka dhoqoshada dadaal walbo oo wax looga qabanayo dib u yegleelida ciidanka Ilaalada xeebaha Soomaaliyeed.
Saacado ka dib, wuxuu wafdigu kulan la qaatay Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaaleynta oo ay weheliyeen Xighayeyaasha Joogtada ee Wasaaradaha Arrimaha Dibedda iyo Shaqada iyo Shaqaaleynta iyo weliba Agaasimayaal ka socday Wasaaradaha, iyagoo isla soo qaaday sida xal looga gaari karo dhibaatada badda Soomaaliyeed oo ay sheegeen in ay saameyn ballaaran ku yeelatay shaqaalaha badmaaxinta Philippine oo gaaraya 270,000 oo badmaax oo ka dul adeega inta badan maraakiibta caalamka. Kulankaas ayaa si weyn laysugu afgartay qodobo badan oo muhiim u ah labada dawladood, iyadoona loo ballamay kulan xiga in laysugu yimaado 23 December 2009.
22 December 2009, wafdigu waxaa xafiiskiisa ku qaabilay Ku-Simaha Madaxweynaha Philippine, ahna Ku-Xigeenka Madaxweynaha oo aad uga mahadceliyay booqashada wafdiga Soomaaliyeed, isagoona faray xubnaha ka socday Wasaaradda Arrimaha Dibedda Philippine in aan laga gaabin wax walbo oo gacan ka geysan kara degenaashaha Soomaaliyeed, taasoo uu tilmaamay in aanan la sii eegan Karin xaalada ay ku sugan yihiin shacbiga Soomaaliyeed. Wuxuu sidoo kale farta ku fiiqay in ay dawladda Philippine xil iska saarayso kala shaqeynta dawladda Soomaaliyeed arrimaha nabadgelyada iyo badbaadada badmaaxiinta Philippine.
Ka dib, waxaa wafdifga ay u dhaqaaqeen Xarunta Wasaaradda Arrimaha Dibedda Philippine oo ay kulan muhiim ah kula lahaayeen Wasiirka Arrimaha Dibedda, waxaana aad loo falanqeeyay dardargelinta xiriirka labada dal oo lagu tilmaami karay mudadii 30ka sano ahayd ee lasoo dhaafay mid gaabis ah, maadaama booqashooyinka madaxda sare ee labada wadan aanay jirin ka dib 1979 xilligaas oo uu Wasiirkii Arrimaha Dibedda ee Soomaaliya booqasho rasmi ah ku tegey magaalada Manila, kulanka ayaa waxaa diirada lagu saaray qaababka ay labada dawladood u furi lahaayeen waji cusub oo iskaashi heer laba geesood ah iyo mid caalami ahba, waxayna Philippine muujisay in ay arrinta Soomaaliya gaarsiin doonto goob walbo oo ay ku leedahay gacan.
Isla maalintaas waxaa wafdiga xafiiskiisa ku qaabilay Senator Richard Gordan oo ah siyaasi magac dheer ku leh wadanka, una taagan tartanka madaxtinimada wadanka oo la filayo inuu dhaco bisha ina soo aadan. Wuxuuna Senator-ka si aad ah ugu dheeraaday taariikhda muhiimka ah iyo stratejiyada labada dal iyo shacab ka dhexeyn karta ee loo baahan yahay in ay dawladaha jira ka wada shaqeeyaan.
Sidoo kale,wuxuu wafdigu kulan la qaatay Hayada Shaqaalaha Qaranka oo ay kawada hadleen sida ay gacan ugu fidin karaan dhigeeda Soomaaliyeed, si u hanato hawlaha qaran ee horyaala. Ka dib, wuxuu wafdigu kulan la qaatay Wasiirka Kalluumaysiga oo ay kawada hadleen dhibaatada lagu hayo badda Soomaaliyeed oo xaalufin aan loo nixin lagu wado, maraakiibta shisheeye ee ka jillaabatana ay inta badan dulsaaran yihiin dad u dhashay Philippine iyo wadama Asia, waxayna ballan qaadeen in ay maraakiibtooda kalluunka ku amri doonaan in ay ka fogaadaan wax u dhimida badaha Soomaaliyeed, ayna diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan DFKMG ah si walbo oo lagu gaari karo badbaadinta hawlahaasna.
Casho sharaf ayuu wafdigu la qaatay xubno ka socday Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Golaha Ganacsatada Philippine iyo Africa, kuwaasi oo soo dhaweeyay wafdiga, bogaadiyayna tallaabada ay Soomaaliya u qaaday dardargelinta xiriirka labada dal, iyaga oo ballan qaaday in ay dhinacoodana gacan ka geysan doonaan horumarinta xiriirka ganacsi ee labada dal.
23 December 2009, wafdigu wuxuu kulan muhiim ah la qaatay ciidanka xooga dalka ee Philippine ee badda oo ay kawada hadleen siyaabaha ay uga taageeri karaan Soomaaliya, badbaadada baddda Soomaaliyeed oo ay xaalufiyeen maraakiib ajnabi ah, iyagoo ka gurta kalluunka iyo kheyraadka dhex ceegaagan badda, kuna daadiya suntan warsahdaha caalamka, taas oo aan awood u hayn dawladda haddii aanay gacan ka helin dawladaha saaxiibada ah.
Ka dib, Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka wuxuu la hadlay warfidiyeenada caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Manila iyo warbaahinta gudaha, isagoo uga warbixiyay dhamaan kulamadii iyo wadahadalladii uu la qaatay madaxda wadanka Philippine iyo guulaha laga gaaray wadahallada labada dhinac. Intaa ka dib, waxaa wafdiga qado sharaf sagootin ah u sameeyay Wasiirka Shaqada iyo Shaqeeleynta, iyadoo hadalladii meesha laysku dhaafsaday ay ahaayeen sidii loo fulin lahaa dhamaan qodobadii lagu wada hadlay inta uu wafdigu booqanayay Manila, isagoo wasiirka cadeeyay in uu dhowaan wafdi horudhac ah u soo diri doono magaalada Muqdisho, ka dibna uu isaga iyo wafdi uu hogaaminayo iman doonaan si loo hormariyo xiriirka labada dal.
Wafdiga ayaa nasasho saacado ah ka dib u dhaqaaqay dhanka gegida diyaaradaha caalamiga ah ee Manila oo ay halkaasi ku soo sagootiyeen madax ka kala socotay Wasaaradaha Arrimaha Dibedda, Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaaleynta, Wasaaradda Kalluumaysiga iyo Xubno ka socday aqalka looga arrimiyo wadanka. Safarkana waxa uu ku soo dhamaaday guul iyo is afgarad laga gaaray dhamaan qodobadii laga wada hadlay.
Dowladda KMG oo ku gacan seyrtay wada hadalo xilligan laga dhex furo iyaga iyo Kooxaha ka soo horjeeda
Dowladda KMG ah ee Soomaaliya ayaa ku gacan seyrtay wada hadalo xilligan laga dhex furo iyaga iyo Kooxaha ka soo horjeeda, kadib markii ay horay u fashilmeen hindiso uu soo bandhigay Madaxweynaha, kaasoo loogu baaqayay wada hadal Kooxaha Mucaaradka.
Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka ahna Wasiirka Kaluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Prof. C/raxmaan Xaaji Aadan Ibbi ayaa meesha ka saaray haba yaraatee wax wada hadal ah oo xilligan u furan iyaga iyo Mucaaradka.
“Mar hore waa jirtay wada hadal aan soo jeedinayay iyo albaabka dib u heshiisiinta oo aan furnay, dhamaan hindisahaas uu soo bandhigay Madaxweynaha waxaa cagta marsiiyay nimanka naga soo horjeeda”ayuu yiri Prof. Ibbi.
Prof. Ibbi ayaa ku eedeeyay kooxaha Mucaaradka in ay sabab u yihiin dhibaatooyinka ka taagan dalka, iyo caburinta shacabka lagu haayo, waxaana uu rajo ka muujiyay in dhowaan is badal uu imaan doono.
“Dhowaan waxay Ciidamada Xooga dalka la wareegi doonaan goobaha ay gacanta ku hayaan kooxaha naga soo horjeeda, rajo aad u weyn ayaana ka qabnaa”ayuu yiri Prof. C/raxmaan Ibbi oo wareysi siinayay Wargeysyada Carabta.
Hadalka Mas’uulkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Dowladda Soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii Ciidamo loo dhisi lahaa, isla markaana ay u wiiqi laheyd awooda Mucaaradka oo sii baaheysa.
Askari ka tirsan Dowladda KMG oo dhaawacay Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka
Askari ka tirsan Ciidamada Booliska Dowladda KMG ayaa maanta dhaawac u geystay Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka, kadib markii uu ka shakiyay Gaari uu watay Xildhibaanka, xilli uu ku sii jeeday Fadhiga Baarlamaanka.
Wararka ayaa sheegaya in Askari oo aan aqoon fiican u laheyn Xildhibaanka uu u dhaawacay, kadib markii uu ka madax adeegay inuu dib u celiyo Gaari uu watay, isla markaana uu diiday.
Afhayeenka Baarlamaanka Aadan Madoobe ayaa sheegay in Ciidamada Booliska ay dhaawaceen Xildhibaanka, kadib markii ay murmeen waxaana uu sheegay in guddi ay u saarayaan qaabkii loo dhaawacay.
Xildhibaanka la dhaawacay ayaa lagu magacaabaa C/risaaq Maxamed Xiirane oo ka mid ah Mudanayaasha Baarlamaanka, iyadoo dad goob joogayaal sheegayaan in dhaawaciisa uu ka dambeeyay shaki laga qaaday gaarigiisa.
Aadan Madoobe ayaa ugu baaqay Xildhibaanada iyo Ciidamada Booliska in ay mucaamilaan hada kadib, ayna is fahmaan, isagoo sheegay in xaalad adag lagu jiro.
Waa Xildhibaankii u horeeyay ee Askari ka tirsan Booliska uu u dhaawaco si is faham la’aan, iyadoo mudooyinkii u dambeeyay uu jiray jahwareer u dhaxeeyay Xildhibaanada iyo Ciidamada Dowladda, kaasoo ku aadanaa tiro badnaanta Mudanayaasha.
Khilaaf soo kala dhex galay Xisbul Islaam iyo Saraakiisha Xisbiga oo kala mowqifyo noqday
Iyadoo labadii maalmood ay isa soo tarayeen warar aan fadhin oo sheegayay in khilaaf uu soo dhex galay Ururka Xisbul Islaam, ayaa waxaa maanta si rasmi u soo shaac baxay khilaafkaas.
Saraakiisha Xisbiga ayaa markii u horeysay soo kala dhex gashay kala fikir duwanaansho dhinacyo badan leh, waxaana saraakiisha Xisbul Islaam u muuqdaan kuwo sii kala go’aya marka loo eego mowqifyadooda.
Madaxa Arrimaha Bulshada Xisbul Islaam Salmaan Sahal Muuse ayaa sheegay in wax shaqo ah aanay ku laheyn Xisbul Islaam cunaqabateynta lagu soo rogay Dowladda Eritrea, isla markaana aanay waxba ka gelin.
Salmaan Sahal ayaa khilaafay hadal uu maalin ka hor jeediyay Xoghahayaha Warfaafinta Xisbul Islaam Maxamed Macalin, kaasi oo ahaa in ay cambaareynayaan cunaqabateynta Golaha Ammaanka ku soo rogay Eritrea.
Waxaa kaloo ay labadaas sarkaal ku kala duwanaadeen hadal uu isla maalintaas jeediyay Maxamed Macalin, kaasi oo ahaa inuu fashil ku yimid wada hadal u socday iyaga iyo Shabaabka, waxaana uu dhankiisa sheegay in wali wada hadalada u socdaan.
“Ninkaas shaqsi ahaan ayuu u hadlay, waxaa idin sheegayaa inuu wali inoo socda wada hadal walaalaha Shabaab meel wanaagsan ayayna marayaan”ayuu yiri Salmaan Sahal Muuse oo shir jaraa’id ku qabtay Ceelasha Biyaha.
Kala fikir duwanaanshahan ayaa waxay u sii gogol xaareysaa bur bur ku yimaada Xisbul Islaam, taasoo dad badan horay u saadiliyeen, kadib markii horay ugu kala qeybsameen dagaalkii Jubooyinka ee Shabaabka la galay Axmed Madoobe.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Diseembar, 2009.